I-Emirates Fleet A380
Umbuzo I-Emirates Fleet A380
unyaka 1 6 edlule #761 by Aidablu1508
Sawubona, ngizama ukungeza ama-liveries kuphakheji le-Emirates Fleet ku-A380, kodwa ama-liveries awubonisi noma i-VC ayisebenzi, ngenzani engalungile, kungenzeka ukuthi ungisize ..
unyaka 1 6 edlule #762 by Dariussssss
Kwenzeka into efanayo kimi. Kunokuthile okukwenzayo ngenguqulo yayo, ngenxa yokuthi uyazi ukuthi kunezinguqulo ezimbili ze-841 ne-861, enye ene-RR nezinye izinto ze-EA GP2700, ngakho-ke kufanele ulale amanga, kufanele wenze indiza ukuthi icabange ukuthi yonke imilenze ukufaka kulungile. Vele usebenzise ikhodi yekhanda le-Emirates, ukwengeza amanye ama-liveries. Kufanele isebenze.
unyaka 1 6 edlule #763 by Aidablu1508
Hi Hi Dariussss
ngiyabonga kakhulu, ukuthi esebenza, ngase ngiqala ukukhipha izinwele zami nezipikili ukuze ngisebenze lokhu
unyaka 1 6 edlule #780 by jck003
zama futhi ulayishe kabusha